Landela imakethe ye-crypto nge-Klever News.
Hlola intuthuko yethu umgwaqo wendlela.
Ukuthi ubuchwepheshe be-ledger obusabalalisiwe buzoletha kanjani obala kuma-Green Bank Bond
Sineplanethi eyodwa kuphela, futhi njengomphakathi, seqe iphuzu lokuqeda izimfuno esizenzayo kuwo. Izinkinga thina...
Isetshenziswa kanjani idatha yakho emhlabeni wezinkokhelo zedijithali?
Izinkokhelo zedijithali azikwazi ukwenzeka ngaphandle kwedatha. Ukucubungula idatha ngesikhathi sokukhokha kwedijithali kuyisihluthulelo semisebenzi eyenziwa kunoma iyiphi inkundla yedijithali. Izinkokhelo zekhadi, idijithali...
I-Klever Exchange Yethula Indawo Yemakethe entsha ye-NFT [Beta]
Ngohlelo olusha lomsebenzisi we-NFT, ungathengisa ngokushesha noma uthenge ama-NFT akho endaweni enamandla ne-Klever. Ngaphezu kwama-Devikins, thina...
Indlela u-Klever aklomelisa futhi ayisekela ngayo inkululeko yakho yezezimali
Emhlabeni jikelele, abantu manje sebezibona beboshelwe ngokwezimali futhi bempofu. Emhlabeni namuhla, kunesidingo esikhulu semikhankaso yokukhanyiselwa...
Izinzuzo ze-crypto wallet evikelekile
Imibono iyashintsha kanye noshintsho lwepharadigm oluhlotshaniswa nobuchwepheshe be-blockchain kanye nesikhala se-cryptocurrency. Kuyini ukusabalalisa? Ukwabiwa kwamazwe kuyinqubo...
Kungani umjaho wasemkhathini uzuzisa ukusungulwa kwe-crypto?
Ukuqhuma kokuhlolwa komkhathi kuye kwaholela ekuthuthukisweni kwe-crypto-innovation esekela amaphupho abantu ngabanye namaqembu okungena emkhathini ngaphandle kwanoma iyiphi...
I-Klever Weekly Newsletter - Januwari 14
I-Klever ne-Polkadot zisebenzisana ukuze zinike amandla ithokheni ye-DOT ku-Klever ecosystem Klever inika amandla usekelo lwe-Polkadot Chain enguqulweni yakamuva ye-Android, 4.10.0 ye...
Okhiye Bekhophi yasenqolobaneni: Ungawagcina kanjani kangcono okhiye bakho be-Klever Exchange
Noma nini lapho uvula i-akhawunti yokuhweba ye-crypto nganoma iyiphi i-crypto exchange, kufanele ukhethe ithuluzi lesiqinisekisi se-2FA. Ama-akhawunti okuhweba e-Crypto nge-Klever Exchanges...
Ubani ozuzayo emhlabeni ongenamali?
Ngesikhathi sokuwohloka komnotho emhlabeni wonke ngo-2008, abantu abaningi bacabangele ezinye izindlela zesistimu yezimali, kodwa ukwethulwa kweBitcoin ngo-2009 kwengeze uphethiloli ku...
Ividiyo: Ukuvikela i-crypto yakho ngendlela ye-Klever kufanele kuhlale kusengqondweni
Ezokuphepha akufanele neze zithathwe kancane. Bheka lawa macebiso ukuze uqiniseke ukuthi i-cryptocurrency yakho iphephile futhi ivikelekile....
AmaVenture Capitalists Achichime Imali Ku-Crypto Space Ngo-2021
Ukwenyuka kwenani lemakethe kufike njengoba izimali ze-venture capital emhlabeni jikelele zitshale imali elinganiselwa ku-$30 billion ku-cryptocurrency ngo-2021 onxiwankulu be-Venture abatshala imali ...
I-Klever ne-Polkadot ziyasebenzisana ukuze zinike amandla ithokheni ye-DOT ku-ecosystem ye-Klever
I-Klever inikeze amandla amapharamitha e-Polkadot ngaphakathi kwe-Klever Wallet; lezo zici manje seziyingxenye yesibuyekezo esisha sika-Klever 4.10.0 se-Android. Izici Ezintsha zifaka: I-Polkadot...
«Langaphambilini ikhasi1 ikhasi2 ikhasi3 ... ikhasi32 Okulandelayo »
Funda kabanzi mayelana ne-cryptos
Uhlamvu Lwemali Lwesonto
Uhlamvu Lwemali Lweviki: Kusama (KSM)
Yini i-Kusama (KSM)? I-blockchain ye-Kusama yakhelwe phezu kwe-Substrate - inkundla ye-blockchain evela ku-Parity Technologies. I-codebase ye-Kusama icishe ifane...
Uhlamvu Lwemali Lweviki – Syscoin (SYS)
I-Bitcoin akuyona nje eyokuqala, kodwa ngaphandle kokungabaza i-blockchain ephephe kunazo zonke ekhona uma kubhekwa ukwamukelwa kwayo ngobuningi nokuzinikela embonini yezimayini yobufakazi bomsebenzi, okuyinto...
Uhlamvu Lwemali Lweviki - I-Polygon (MATIC)
Ngaphambilini eyayaziwa ngokuthi i-MATIC, i-Polygon iyinkundla ye-blockchain scalability eyakhelwe ohlelweni lwe-Ethereum Blockchain. Yaziwa nangokuthi i-Intanethi ye-Ethereum ye-Blockchains....
Uhlamvu lwemali Lweviki: Chiliz (CHZ)
Yini i-Chiliz (CHZ)? I-Chiliz iyi-cryptocurrency esetshenziselwa kuphela ezemidlalo nokuzijabulisa yifemu yase-Malta yase-FinTech. Isebenza i-Socios, a...